လိမ္မော်ရောင်စက်ဘီးဘဲလ် နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ လိမ္မော်ရောင်စက်ဘီးဘဲလ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
ငါတို့မှအရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ခမ်းနားထည်ဝါသောအသုံးအစုအဝေး Available လိမ္မော်ရောင်စက်ဘီးဘဲလ် ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီအခြေခံကျသောပစ္စည်းမှလုပ်ကြံမှုများနေကြပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူ Assisted, JANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD. ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးမှာဒီဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ အပိုင်းပုံစံကဒီကျနော်တို့ standard နှင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများနှစ်ခုလုံးတွင်အဆိုပါတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ဤနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံနှုန်းများကိုတစ်ဦးလျှင်အဖြစ်အထွဋ်အထိပ်တန်းပစ္စည်းနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးမြင့်မားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များလုပ်ကြံမှုများနေကြပါတယ်။
ပုံစံ - JH-214G/JH-214W
ပစ္စည်း:သံမဏိထိပ်နှင့် UCP အခြေစိုက်စခန်း
ထုပ်ပိုးသည်:1 pc/PE,10 pc/box 100 PCs/ctn.,၀ ယ်သည်.8 cuft
ဆး.ဒဗလျူ.:၉ ကီလိုဂရမ်ဂျီ.ဒဗလျူ.:၁၁ ကီလိုဂရမ်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/orange-bike-bell.html
အကောင်းဆုံး လိမ္မော်ရောင်စက်ဘီးဘဲလ် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် လိမ္မော်ရောင်စက်ဘီးဘဲလ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan